အဲယားဘတ်စ် A380-800 VC ကိုပြင်သစ်လေကြောင်း DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 44.7 ကို MB
downloads ရယူရန္ 307 741
Author: Project မှအဲယားဘတ်စ်, repack နှင့် Rikoooo အားဖြင့် 2D Panel ကို, Facked အားဖြင့်မှုတ်သွင်း VC ကိုဆုံးမသော
ပြင်ဆင်ချက် VC ကို bug တွေနှင့် Rikoooo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့ 05D panel ကိုထည့်သွင်း: 05 / 2013 /2အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်။
အဲယားဘတ်စ် A380 ပြင်သစ်လေကြောင်းအရောင်များကြောင့်ပြီးပြည့်စုံဗူးပဲ! တကယ့် A380 နှင့်ထုံးစံအသံအပေါ် အခြေခံ. ကို virtual cockpit ပါဝင်သည်, ဒီဗူးလည်းဒီလိုပါပဲဖန် (ကားရှေ့မှနျ) နှင့်ရေဒီယိုနှင့်အတူ bug တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအခန်း (ဒုတိယထပ်) လည်းလုပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ (သာမိုးရွာနေလျှင်ကားရှေ့မှနျဖန်ဒီလိုပါပဲဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ FSX SP2 နှင့် P3D) ။ 2012 ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်လေကြောင်းအင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားပြီး 538 ထိုင်ခုံတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူရှစ်ထိုကဲ့သို့သောလေယာဉ်သိမ်းယူ "မဟာမိတ်အဖွဲ့မိသားစုဆရာဝန် 7200 ။ "
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် A380 အဲယားဘတ်စ်တစ်ဦး EADS လက်အောက်ခံကထုတ်လုပ်ဟာအလွန်အရပ်ဘက်လေယာဉ် widebody ရှည်ခရီးရှည်သွားလေးအင်ဂျင်ကို double-နှစ်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဒြပ်စင်နောက်ဆုံးပရိသ Toulouse ပြင်သစ်နိုင်ငံပြု, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, စပိန်, နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်အဓိကအားဖြင့်တည်ဆောက်ထားကြသည်။
အဆိုပါ A380 အစီအစဉ်, 12 ဘီလီယံယူရိုစုစုပေါင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်ကိုအဲယားဘတ်စ် A1990XX အဖြစ်နှစ်လယ်ပိုင်း3အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးလေယာဉ် Toulouse လေဆိပ်အတွက် 27 ခုနှစ်ဧပြီလ 2005 အပေါ်ရာအရပျကို ယူ. ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုစင်္ကာပူနှင့်ဆစ်ဒနီအကြားစင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းအားဖြင့်အောက်တိုဘာလ 25, 2007 ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါ A380 2012, ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုကို၎င်း, Hughes H-4 Hercules နှင့်အန်တိုနော့ဗ် An-225 ပြီးနောက်လေကြောင်း၏သမိုငျးတှငျတတိယအကြီးဆုံးလေယာဉ်တွင်အကြီးဆုံးအရပ်ဘက်လေယာဉ်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ A380 ရဲ့အထက်ကုန်းပတ်လေယာဉ်ဧရိယာဟာသူ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း, ဘိုးအင်း 50-747 ထက် 400% ပိုမိုပေးကမ်းခြင်း, လေယာဉ်ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကိုအရှည်တစ်လျှောက်ကိုတိုးချဲ့။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
Rikoooo + အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနယူး 2D panel ကိုတညျ့နှင့်အဘို့အ VC ကိုအဆင်ပြေအောင် FSX နှင့် Prepar3D
အ VC နှင့် 2D Panel ထဲကကို HUD ညဉ့်အခါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, panel ကို icon များနှင့်အချို့သောအကောက်ခွန်အထွာနှင့်အတူထည့်သွင်း ...
အဆိုပါ 2D panel ကဒီအထုပ်ထဲတွင် Pre-installed နှင့်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်သီးခြားစီ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်: 2D Panel ကို Download (တညျ့ VC ကို) - 8MB pa_a380_2dpanel_rik_fsx.zip